Banyere Anyị - Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.
Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd. e guzobere na April 2010. Ọ bụ a keukwu enterprise integrating siri ike ọrụ nnyocha, mmepụta na ahịa.Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ịchọta ngwọta teknụzụ na ikike ịnye ngwọta ngwaahịa kachasị mma dịka mkpa ndị ahịa si dị.
Anyị nwere ike ịmepụta taya zuru oke nke taya siri ike maka forklifts, taya siri ike maka nnukwu ígwè ọrụ ihe owuwu, taya siri ike maka ihe eji eme ihe, taya skid maka ndị na-ebu ụgbọ mmiri, taya maka ogbunigwe, ọdụ ụgbọ mmiri, wdg, taya na PU wiil maka eletrik eletrik, na taya siri ike maka nyiwe ọrụ ikuku.Enwere ike ịhazi taya siri ike dịka mkpa ndị ahịa siri dị.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ na-agbaso ụkpụrụ nke China GB, US TRA, European ETRTO, na Japan JATMA, ma gafere ISO9001: 2015 àgwà usoro asambodo.The ụlọ ọrụ ugbu a kwa afọ ahịa olu bụ 300,000 iberibe, nke 60% na-aga North America, Europe, Asia, Oceania, Africa, wdg, na ọ na-eje ozi na domestically exported forklift emepụta, metallurgical ụlọ ọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri , ọdụ ụgbọ elu, wdg.
Ebumnuche mbụ nke WonRay tọrọ ntọala bụ:
Iji mepụta ikpo okwu na-eto eto maka ndị ọrụ chọrọ n'ezie ime ihe na ha nwere ike ime ya nke ọma.
Iji jee ozi ndị mmekọ chọrọ ịre taya dị mma wee merie site na azụmahịa.
Ụlọ ọrụ na ndị ọrụ na-etolite ọnụ.Jiri Ogo na teknụzụ merie.
Anyị ga-ekwusi ike na otu àgwà anyị nwere ọnụahịa kacha ala, otu ọnụahịa anyị nwere àgwà kacha mma.
Ihe ndị ahịa chọrọ mgbe niile na-ebute ụzọ.Ogo ngwaahịa na-ebute ụzọ mgbe niile.
Lekwasị anya --- na nyocha, na mmepụta, na ọrụ.
Ndị isi otu a sitere na YANTAI CSI.Onye nwe ya, onye isi injinia,
Onye njikwa mmepụta anyị na ndị ọrụ ụlọ nkwakọba ihe anyị YANTAI CSI bụ atụmatụ ogologo oge nke ITL si Canada.ITL bụ taya siri ike ire ere bụ otu ugboro No.1 na Asia.
Ndị otu teknụzụ meriri ntụkwasị obi n'aka Caterpillar wee kwadoo afọ ole na ole.na onye isi teknụzụ bụ injinia anyị ugbu a.
The teknuzu otu ama na-arụ ọrụ na siri ike taya azụmahịa n'elu 20 afọ , N'ihi ya, n'agbanyeghị na teknuzu ma ọ bụ ahịa , anyị niile na-aghọta nke ọma na nwere ikike izute dị iche iche chọrọ si dị iche iche ahịa.
Ụdị & Asambodo
WRST na WonRa bụ ụdị ụlọ ọrụ mepụtara n'onwe ha.Edebanyela aha ya na China, Japan, South Korea, European Union, United Kingdom, Chile, Turkey na Morocco.
Anyị nwere ike ịnye SASO, iru na asambodo ndị ọzọ dị mkpa dịka ahịa dị iche iche na mkpa ndị ahịa si dị
Netwọk ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike inye ndị ahịa ihe dị elu na ọrụ zuru oke mgbe ọrịre ahịa na ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ.